निर्वाचनमा गुल्मीमा कसले कति गरे खर्च ? कसले अहिले सम्म बुझाएनन् खर्च ? – ebaglung.com
निर्वाचनमा गुल्मीमा कसले कति गरे खर्च ? कसले अहिले सम्म बुझाएनन् खर्च ?
२०७४ माघ ९, मंगलवार १२:५०	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ माघ ९ । मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा गुल्मीबाट उमेदवार भएका १० जनाले अझैसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । मतपरिणाम घोषण भएको ३५ दिनसम्म सबै उम्मेद्धारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भएपनि गुल्मीका १० जना स्वतन्त्र उम्मेद्धारले अझैसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरुमा सबै स्वतन्त्र उम्मेद्धारहरु रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेद्धार बनेका दोमोदर भण्डारी र लक्ष्मण भण्डारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश १ बाट पनि ३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यसरी खर्च विवरण नबुझाउनेहरुमा कृष्ण थापा, दिना नाथ ज्ञवाली र रेसम राज न्यौपाने रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलय गुल्मीका प्रमुख गणेश खत्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट पनि चुरामणी भण्डारीले बुझाएका छैनन् । क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश १ बाट धनिश्वर गौतम र सन्तोष कुँवर तथा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदश २ बाट विष्णु सुनार र तेज बहादुर बोहोराले पनि निर्वाचन खर्च नबुझाएको खत्रीले बताए । उचित कानुन नभएकोले खर्च विवरण नबुझाउनेलाई हुने कारवाहीको विषयमा पनि केहि जानकारी नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ । यद्यपी उनीहरुलाई केन्द्रको निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ने कार्यलय प्रमुख खत्रीले बताए ।
विजयी मध्ये प्रतिनिधिमा विष्ट र प्रदेशमा बरालले गरे धेरै खर्च
२ प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभामा उम्मेद्धारी दिएका कुल ५२ जनामध्ये ४२ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । विजयी उमेदवार मध्ये प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेद्धार गोकर्ण विष्टले धेरै खर्च गरेको पाइएको छ । विष्टले २२ लाख ७४ हजार खर्च गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का विजय उमेदवार प्रदिप ज्ञवालीले १८ लाख १ सय ७० खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ विजयी उमेदवार मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश १ का सुदर्शन बरालले खर्च गरेका छन् । बरालले १४ लाख ९२ हजार २ सय ६६ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश २ का सासंद कमलराज श्रेष्ठले ८ लाख ९२ हजार २ सय ८० खर्च गरेको पाइएको छ । क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश १ का सासंद खड्ग केसीले १४ लाख ४० हजार र प्रदेश २ का सासंद दिनेश पन्थीले १४ लाख १६ हजार ३ सय ७६ खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ । गुल्मीका २ प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा सबैमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनले जित हात पारको थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर विस्तारको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिईनुपर्ने स्थानीयवासीको माग !
प्रवास : जापानी पूर्व प्रेमिकामाथी छुरा प्रहार गर्ने नेपाली युवक पक्राउ !